Alika mpiandry Kaokazy: Fantaro ny toetra, ny fiaviany ary ny fikarakarana | Tontolo alika
Alika mpiandry Kaokazy
Lourdes Sarmiento | | Taranaky ny alika
Ny karazana alika rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy. Ny toetra ara-batana sy ara-tsaina dia misy ifandraisany amin'ny fivoaran'ny fototarazony sy ny fiasa izay nampiasana azy ireo. ny Teratany ny Alika Mpiandry Kaokazy, araka ny anarany, avy amin'ny faritra Kaokazy.
Noho ny tontolo iainana dia namorona palitao afaka miaro azy amin'ny maripana ambany ary ny ratra mahazatra mahazo anao amin'ny varotra fiompianao. Ny endrik'ilay vatany dia matanjaka tokoa ary anisan'ny alika lehibe indrindra misy izy io.
Na dia misy karazany isan-karazany aza ny alika Kaokazy manana toetra mitovy amin'izany, amin'izao fotoana izao karazany iray ihany no ekena amin'ny anaran'ny mpiandry ondry Kaokazy.
Ny Russian Kennel Club dia aleony mampiasa ny dikantenin'i Rosiana ho an'ny mpiandry ondry Ovcharka, anarana iray izay nanjary malaza tany amin'ny faritra andrefana ihany koa ny karazany. Ny mpiandry omby Kaokazy dia ampahany amin'ny telo lahy malaza amin'ny mpiandry ondry rosiana fantatra amin'ny anarana hoe mpiandry hetra rosiana atsimo ary mpiandry ondry azia afovoany.
Ny niandohan'ity alika hafahafa ity dia mbola somary tsy azo antoka ihany ary tsaho fa ny fiandohan'ny karazany dia raisina amin'ny alika Tibetana Mastiff. Ny tsy azo lavina dia efa nampiasaina hatry ny ela toa mpiandry omby sy mpiandry ondry noho ny fisehoany tsy mampino, ny tanjaka ary ny fanoherana ny maripana ambany.
Ny fisehoana ofisialy voalohany an'ny karazany amin'ny alika tandrefana dia nanomboka tamin'ny 30 tany Alemana. Ny marina dia karazany taloha manaitra izy io manana ny mampiavaka azy. Azo antoka fa ny niandohany dia avy amin'ny faritany misy fari-piainana sarotra, lafiny iray izay namela ny fivelarana fototarazo manokana an'ny karazany.
Ny kaikitry ity alika ity dia anisan'ny matanjaka indrindra amin'ny tontolon'ny kaninina. Ity fitaovana lehibe ity dia tena ilaina amin'ny anao toetra miaro mampino sy toetra tapa-kevitra.
Azo antoka fa tsy biby fiompy ho an'ny habaka rehetra sy karazana tompony izy io. Ny olona manapa-kevitra ny hiteraka an'io alika io dia tokony hampahafantarina tsara momba azy ireo toetra, fikarakarana ary filàna. Raha manabe ny tenanao tsara ianao dia hanana orinasa mahatoky sy miaro.
Mikasika ny fisehoan'ny alika mpiandry Kaokazianina raha tezaina tsara izy ireo salama sy lava velona izy ireo. Mikasika ny volon-kodiny dia manana taolana mahery sy vatana hozatra izy ireo.
Ny orona sy ny orona dia matevina, ny sofiny dia telozoro ary mihantona amin'ny sisiny ary voarara ny manapaka ny sofiny. Lehibe ny lohan'ireto biby fiompy ireto.
Satria heverina ho alika goavambe izy ireo dia tsy maintsy heverina fa ny haben'ny alika ireo dia somary lehibe. Mikasika ny haavony, ny salan'isa dia 70 santimetatra. Saingy, misy tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Ny haavon'ny ambany indrindra ho an'ny lehilahy dia 65 santimetatra ary 62 ho an'ny vavy Raha ny haavon'ny avo indrindra dia tsy misy fetra voatondro. Ny lahy lehibe kokoa ary afaka refesina hatramin'ny 75 santimetatra ary 70 ny vavy.
Noho ny tanjany sy ny volony mampino, mavesatra ny alika Kaokazy. Ny vehivavy zara raha mihoatra ny dimam-polo kilao fa milanja 70 kilao ny lahy ary mety mahatratra 90 aza. Mikasika ny lanjany dia miharihary ny fihenan'ny firaisana ara-nofo amin'ny karazany.
Mikasika ny palitao dia misy karazany telo, lava, fohy sy salantsalany volo. Ho an'ireo karazany telo, ny volo dia matevina sy malama. Izy ireo dia manana ny maha izy azy manokana ny fananana akanjo lava volon'ondry miloko maivana kokoa izay miaro azy ireo amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Ny volom-borona dia samy hafa ny volony, fa ny fotsy sy fotsy ihany misy volony lava dia avela hifaninana. Misy ihany koa ny santionan'ny loko mainty sy ny toerana misy ny afo sy ny chestnut.
Ny fahalalana an'io lafiny io an'ny tompona dia manan-danja ary noho ny fiasan'ity alika ity nandritra ny taonjato maro niaro sy nitarika ny biby fiompy, dia manana toetra voajanahary an'ny mpitarika izy io. Noho izany antony izany, ny tompony dia tokony hametraka ny tenany ho mpitarika ny fonosana lasa alfa ary noho izany dia tsy maintsy manana fahalalana ianao.
Ho an'ny tompona tsy manana traikefa, ny fiompiana ny biby dia ho raharaha sarotra, satria ny tompony dia tsy maintsy manaja sy mankatò amin'ny alàlan'ny fanehoana fifehezana ilay biby. Raha mandaitra izany fatorana tsy mety vaky no hoforonina eo amin'ny tompona sy ny biby.
Na dia mandaitra aza izany dia tokony ho fantatra fa ny Caucasian Shepherd dia biby manana toetra voa mafy ary raha heverina fa tandindomin-doza izy na ny fianakaviany dia hanao zavatra araka ny hitany fa ilaina mba hiarovana ny faritaniny.
Noho io antony io dia tena zava-dehibe ny fihazonan'ireo olona tsy mpihavana biby ny halaviran'izy ireo ary aza hadinoina fa miatrika manaikitra mahery izy ireo. Ny fifandraisan'ny biby fiompy amin'ny ankizy dia tsy mampidi-doza mihitsy raha dinihina ny toetrany dia tsy heveriny ho mampidi-doza izy ireo ary koa ny tompony.
Tena zava-dehibe ny tsy itondrana herisetra ireo biby ireo, tsy mila mamporisika toetra amam-panahy mihitsy ianao. Afaka mankatò izy ireo, saingy tsy maintsy hajaina ny toetra voajanahary miaro azy ireo. Anisan'ireo fiompiana fiompiana, mpiandry Kaokazy tokana afaka miaraka amboadia roa izay manafika ny andian'ondry.
Na eo aza ny lanjany sy ny hozany, Mahagaga fa mailaka sy mailaka izy ireo ary ny volon'izy ireo dia tsy miaro azy ireo amin'ny toetrandro ihany fa amin'ny manaikitra koa, satria ny hateviny dia manasarotra ny hamelezan'ny nifin'ny mpanohitra ny hoditra.
Tsy azo lavina fa ny alika Kaokazy dia manana ny lazany ho mahery setra kanefa ny ankamaroan'io laza io dia azo tamin'ny fitsaboana tsy fahalalana an'ity karazana ity, mpiaro lehibe ny fianakaviany. Manao izay nankinina aminy ary mahatanteraka mahomby ny iraka ampanaovina azy.
Lafiny iray manan-danja izany mila toerana handaniany angovo izy ireoMilamina sy mahaleo tena ary tampoka izy ireo rehefa mifandray amin'ny firazanana hafa. Midika izany fa tsy alika an-tanàn-dehibe izy io satria any amin'ny habakabaka an-tanàna dia tsy afaka mamorona lafy tsaran-javatra kely amin'ny toetrany izy.
Na dia salama tsara aza ity biby ity ary tsy manana aretina mandova raha mora tratran'ny aretina amin'ny karazany lehibe.
Zava-dehibe ny fanarahana ny torolalan'ny mpitsabo biby momba ny sakafo tokony harahin'izy ireo sy ny fisorohana aretina toy ny hipla, kiho ary aretim-po. Ity farany ity dia misy akony lehibe amin'ny sakafon'ny biby, ka izany no antony tokony hialana amin'ny lanjany be loatra sy ny hatavezina.
Anisan'ny fikarakarana mahazatra, ny vaksiny dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ary koa zava-dehibe ny fikosehana azy amin'ny fitaovana ilaina indroa isan-kerinandro. Noho ny fifandraisany amin'ny natiora dia tokony horaisina tsara ny fisorohana sy ny fikolokoloana amin'ny karazana katsentsitra.
Tianao ve ity karazana alika ity? Araho izahay dia hahita fampahalalana bebe kokoa momba an'io sy ny karazany hafa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Taranaky ny alika » Alika mpiandry Kaokazy
Mike dia hoy izy:
Tsy hikodiadia aho. Ny alikako dia tratry ny lozam-pifamoivoizana kely ary voakitika ny valahany. Nomena azy ny fanasitranana samihafa ary nihatsara izy ary niaraka tamin'izay dia ratsy indray izy ary ankehitriny dia nanao tsara be nandritra ny volana vitsivitsy hatramin'ny nanomezako azy cissus mascosana.
Tsy mampino izany, na ny mpitsabo biby aza gaga.
Mamaly an'i Mike
Lourdes Sarmiento dia hoy izy:
Faly be izahay, saingy tsy maintsy tadidintsika fa ny mpitsabo biby ihany no afaka manapa-kevitra amin'izay homena na tsia ny biby.
Valiny tamin'i Lurdes Sarmiento
Faly be izahay, saingy tsy maintsy tadidintsika fa tsy ny mpitsabo biby no milaza amintsika mandrakariva fa tokony handray ny biby fiompintsika izy na tsia.